FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA BELZIKA - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika belzika
Malinika Belzika 7 volana
Lisitry ny alika mifangaro Mixeur Maluhia Belzika
Mpiandry Belza Malisiana
Alika mpiandry belza
Mpiandry Ondry Malinina
Ny Malisiana Belzika dia manana vatana izay matetika faritana ho toradroa, satria io no endrika isehoany rehefa ny tongotra sy ny topline no jerena avy eo amin'ny sisiny. Lalina ny tratra. Ny topline dia avo lenta, somary mitanjozotra amin'ny malazo. Ny haben'ny loha amin'ny ankapobeny dia mifanaraka amin'ny vatana. Ny karan-doha dia fisaka miaraka amin'ny sakany sy ny halavany mitovy halavany. Somary maranitra ny vavam-borona ary mitovy halava amin'ny tampon-karandohany amin'ny fijanonana antonony. Mainty ny orona ary toy izany koa ny molotra tery. Mihaona amin'ny hety na manaikitra ny nify. Ny maso salantsalany, miendrika amandy dia volontsôkôlà. Ny sofina miorina dia telozoro ny endrika. Ny rambony dia matanjaka amin'ny fotony ary ny taolana dia mahatratra ny hock. Toy ny saka ny endrin'ny tongotra. Mety hesorina ny demonia. Ny toetr'andro mahatohitra, palitao indroa dia fohy sy mahitsy. Ny loko palitao dia tonga amin'ny volondavenona mena ka hatramin'ny mahogany ka hatramin'ny mainty, miaraka amin'ny tendrony mainty amin'ny volo. Mainty ny sarontava sy sofina. Ao ambanin'ny vatana, ny rambony sy ny tendrony aoriana dia volondavenona maivana kokoa. Ny volo manodidina ny hatoka dia toa vozon'akanjo, satria somary lava kokoa.
Ny Malisiana Belzika dia iray amin'ireo mpiandry ondry efatra belza. Alika tena mamirapiratra sy mpankato, tapa-kevitra izy ary mandinika miaraka amin'ny fikajiana fiarovana sy faritany mahery. Mifandraisa tsara hisorohana azy tsy ho saro-kenatra na mora tohina. Ny Malisiana Belzika dia mila tompo za-draharaha izay hentitra, nefa tsy be tanana. Raha masiaka ianao na mihoa-pefy dia tsy hiara-miasa. Ny tompony dia mila mampiseho fahatokisana, fahefana voajanahary amin'ny alika. Fitsipika mifanaraka tsy maintsy apetraka ary atao mazava. Fiarovana voajanahary ity karazany ity ka tokony hampiofanina sy hifaneraserana tsara hatramin'ny fahazazany. Ny alika kely dia tokony hampifandraisina hatrany am-bohoka. Tsara ho an'ny fankatoavana ny asa sy ny fifaninanana, mahatonga azy ireo ho polisy tsara ireto alika ireto amboa mpiambina . Ity karazana asa ity no asan'izy ireo voalohany. Na izany aza, manao biby fiompy tena tsara izy ireo raha manana tompona afaka manohitra ny sainy amin'ny fisian'ny fitarihana. Izy ireo dia mailo hatrany, mailo ary tsy mivadika. Ny Belzika Belzika dia tsara amin'ny ankizy raha mifanerasera tsara amin'izy ireo. Ity karazana ity dia mila tafiditra ao amin'ny fianakaviana fa tsy hihidy ao anaty tranon-kenna. Mila fitarihana izy ireo, fanatanjahan-tena isan'andro miaraka amin'ny fiofanana sy ny fiarahana, satria raha tsy misy izany dia mety manjary manimba ary sarotra tantanana. Ny Belzika Belzika dia angovo avo, manana fahaizana ara-tsaina avo lenta ary mora azo. Mila asa hatao izany, indrindra raha mifanehatra amin'ny tsipika fiasa ianao. Mitandrema rehefa mampiditra an'ity alika ity amin'ny biby fiompy tsy kaninina kely . Mety hanjaka amin'ny alika hafa izy io ary mila tompona afaka mifampiresaka amin'ilay alika fa fitondran-tena tsy ilaina ny manjaka. Raha omena fiaraha-miasa tsara amin'ny saka sy biby hafa, dia tsy tokony hisy olana izany. Mety hiseho amin'ny fomba voajanahary ny Nosy Belzika Belzika fiompiana fiompiana toy ny fanenjehana sy ny fihodinana, ny fivezivezena mandritry ny ora maro ary ny fikitikitihana ny voditongotry ny olona. Tsy maintsy ampianarina izy ireo mba tsy hanao izany amin'ny olona. Alika be fitakiana ity. Mila tompona efa za-draharaha satria mora sarotra ny mifehy raha tsy hain'ny tompony ny mitantana azy. Ny fomba itondran'ny tompony ny alika dia mety hiteraka fahasamihafana lehibe amin'ny toetrany sy masiaka . Miresaha amin'ny olona za-draharaha amin'ny karazany alohan'ny ividiananao ny alikanao. Matetika ireo alika ireo dia manaitra, aza miorina amin'ny firaketana ny zava-bita sy ny fisehoanao fotsiny. Alao fotsiny ity karazana alika ity raha azonao tsara ny dikan'ny atao hoe Alfa .
Haavony: Lehilahy 24 - 26 santimetatra (61 - 66 cm) Vehivavy 22 - 24 santimetatra (56 - 61 cm)
Milanja: 55 - 65 pounds (24 - 29 kg)
Ity karazana mafy orina sy salama ity dia tsy manana olana ara-pahasalamana lehibe. Ny ahiahy kely izay efa hita dia ny aretin-koditra, ny olana amin'ny maso, ny fahamendrehana tafahoatra, ny herisetra tafahoatra ary indraindray ny tampon-tenda ary ny tavy sika.
Ny Belzika Belzika dia hanao tsara ao amin'ny trano iray raha toa ka ampiasaina tsara izany. Izy io dia mavitrika mavitrika ao an-trano ary hahavita tsara indrindra amin'ny tokotanin-tsaha farafahakeliny. Aleon'ity karazany ity ny toetrandro mangatsiaka, fa mifanaraka tsara amin'ny hafa. Afaka miaina ivelan'ny trano izy io fa aleo miaraka amin'ny olony.
Alika miasa io izay zatra fiainana an-kalamanjana miasa. Raha izany dia mila fanatanjahan-tena be dia be izy, anisan'izany ny a dia an-tongotra lavitra isan'andro . Ho fanampin'izany, dia handray soa be dia be ny fandroahana faran'izay betsaka araka izay azo atao amin'ny faritra azo antoka.
12-14 taona eo ho eo
Ankizy 6 - 10 eo ho eo
Ny palitao malama sy lava volo ao Malondrika dia mora haingo. Borosio matetika amin'ny borosy mafy volo ary mandro raha tsy tena ilaina izany, satria ny fandroana dia manaisotra ny fanamainana amin'ny palitao. Ity karazana ity dia mpamafa hazavana tsy tapaka, fa mandoaka indroa isan-taona.
Ny Malisiana Belzika dia nomena anarana taorian'ny tanànan'i Malines Belgian. Na dia mbola tsy fahita firy aza ny Belzika Belzika any Etazonia, dia malaza any Belzika, ny firenena niaviany. Izy io dia iray amin'ireo karazany efatra amin'ny zanak'ondry belza, ny Malisiana Belgian, Tervuren Belzika , Groenendael Belzika , ary ireo tsy dia malaza loatra Laekenois belza , izay mizara fototra iraisana. Any amin'ny ankamaroan'ny firenena sy klioban'ny fiompiana ny alika efatra dia heverina ho karazany iray ihany miaraka amin'ny karazany maro karazana amin'ny karazana palitao. Ny alika efatra dia mizara fari-pahaizana amin'ny firenena rehetra ankoatry ny AKC, izay nanomboka tamin'ny 1959 dia manaiky azy ireo ho karazany misaraka ary tsy manaiky ny iray amin'ireo efatra (ny Laekenois ), fa ny UKC, izay rezistra amerikana koa dia manaiky ny karazany efatra ho karazany iray. Miovaova sy mahira-tsaina tokoa, ny karazany efatra amin'ny vala Belzika dia manana talenta maro isan-karazany, ao anatin'izany fa tsy voafetra ho azy, ny asan'ny polisy toy ny, ny zava-mahadomelina sy ny fikarohana baomba, ny fiarovana ary ny Schutzhund, ny fikarohana sy ny famonjena, ary koa ny fankatoavana, ny hakingana, ny fanarahana, fiompiana, sled ary fisarihana sarety ary ho torolàlana ho an'ireo jamba sy mpanampy ireo sembana. Ireto alika avo lenta ireto ary tena marani-tsaina dia mila fitarihana, mila fanamby ary ampiasaina isan'andro ary noho izany tsy natao ho an'ny rehetra, fa afaka manao namana akaiky fianakaviana amin'ny tompony marina. Ny Malisiana Belzika no voalohany amin'ireo mpiandry ondry efatra nametraka karazana. Mandra-pananganana ny efatra hafa amin'ny karazany dia nantsoina hoe 'Berger Belge a poil court autre que Malinois,' izay midika hoe 'Sheepdog mifono volo Belza izay tsy Malinesia.' Ankehitriny, ny vala efatra dia malaza any Belzika, miaraka amin'ny alika Laekenois sy Malinois izay matetika ampiasaina ho alika karazana miasa, noho ny Belzika Groenendael sy Tervuren fa ny karazana rehetra mbola mahatonga mpiasa tena mahay.
Dante, Malinios Belzika iray taona milanja 34 kilao no natolotra tany Belzika.
'Adonis dia mpiandry ondry mahafinaritra any Belzika. Izy dia mpiara-miasa mahafinaritra ho anay mivady, ary koa ho an'ny zanakay vavy efa ho 2 taona. Namaky be dia be aho alohan'ny nakana azy ho alika kely (amin'ny 6 herinandro), hiomanana amin'ny fitaizana a Mpiandry Alemanina —Ny kely indrindra dia izay ny drafitra mandra-pahitako an'i Adonis. Miasa amin'ny fahafaha-miditra an-tsehatra amin'ny fitondran-tena aho, ary tena vonona ny hifanaraka sy hampianatra miaraka a tanana mafy nefa tsara fanahy . Adonis dia tena nianatra haingana fa alika be fanahiana. Tiany kokoa ny mampifaly ahy mihoatra noho ny miasa amin'ny sakafo. Fanamby tsy an-kijanona ny fandreseny ny tahotra saika ny zava-baovao rehetra, saingy mandingana ny tahotra vaovao isika miaraka amin'ny fitarihana mafy orina. Nandeha nianatra tany amin'ny sekoly fankatoavana izahay, nefa nahita fa mahasitrana loatra sy miadana ho anay mianadahy. Nijanona izahay fa niasa tao an-trano foana. Adonis dia manana fifehezan-tena lehibe ary ny ‘hafetseny’ dia mampiala voly ny olon-dehibe sy ny ankizy. Adonis dia tsara miaraka amin'ny biby hafa raha mbola ampidirina tsara izy. Mafana fo izy, be resaka, ary miaro. Izy dia alika mpiambina mahafinaritra , ary mailo indrindra rehefa tsy ao an-trano ny vadiko (ny Alfa). Na dia nampiofana an'i Adonis aza aho, dia izao no mitondra tena tsara indrindra ho an'ny vadiko rehefa mandeha an-tongotra . Tiany ny mandeha an-tongotra lavitra, azo avela tsy ho afa-miala ary mbola eo ambany fifehezana feo lehibe. Mampiaraka ny baikon'ny feo sy ny tanana. Adonis dia mahay milalao miafina, mitady sy manenjika baolina ary milomano. Adonis no alika tadiaviko foana tamin'ny mbola kely, nefa tsy afaka nanana. Ny fananana alika rehefa olon-dehibe dia nahazo valisoa bebe kokoa noho izay noheveriko. Mahalala mampianatra ny alikanao ary ho an mpitarika fonosana mahomby tena manatsara ny K9 - fifandraisan'olombelona. '
Many the Belgian Malinios puppy at 4 volana old— 'Alika mavitrika sy marani-tsaina ary mahafinaritra izy.'
Ity i Katie, Malisiana Belzika 5 taona. Izy dia mpiara-miasa amin'ny tompony nandritra ny 2 taona tao amin'ny US Coast Guard. Misotro ronono izy izao ary miaina fiainana milamina ao an-tokotanin'ny tompony.
Clara the Belgian Malinois dia alika tsara tarehy izay novonjen'ny Fikambanana Humane teo an-toerana. Tiany ny olona, ​​milalao alika sy saka hafa.
Tito ilay mainty belza Maluhia amin'ny 6 volana
Tito ilay Belzika mainty hoditra any Malinois 6 volana no nanampy azy nisotro
'Nova, Lady ary Willow dia mpiray monina avokoa. Tsy afaka nikarakara azy ireo ny mpiompy, ka tsy nokasihin'ny olombelona mihitsy izy ireo raha tsy 5 taona. Ao amin'ny sary, 7 volana izy ireo ary tonga teto amiko mba hianatra ny fomba tokony ho alika ara-tsosialy, fa tsy alika kennel. '
Hijery ohatra misimisy momba ny Belzika Malinois
Sary 1 an'ny Belzika Malisiana
Alika mpiandry: sary an-tsokosoko azo raisina
Karazana alika mpiandry
Fampahalalana momba ny alika Retriever aostralianina
Fampahalalana sy sary miteraka alika Ski-sisintany
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Prazsky Krysavik
Sary avy amin'ny alika maltese, 1
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika any Pit Pitso amerikana
Fampahalalana momba ny alika Yorkillon Dog
Lisitry ny alika mifangaro Lhasa Apso
Ny fampahalalana momba ny alika sy alika an'ny St. John's Dog Dog
spaniel akoho kely feno olon-dehibe
amboadia sy husky afangaro alika kely
alika manao ambadika
mpiandry alemà lava volo mainty sy mainty
boston terrier mifangaro amin'ny boxer
Labrador retriever & catahoula leoparda alika Mix
rat terrier pit bull mix